ဇူလိုင် (၃၀)ရက် ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ကြီး အပါအဝင် ဘုရားစေတီ များ အားလုံး ဖွင့်ပြီ . . . – Let Pan Daily
ဇူလိုင် (၃၀)ရက် ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ကြီး အပါအဝင် ဘုရားစေတီ များ အားလုံး ဖွင့်ပြီ . . .
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးအပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ဘုရားစေတီ များ အားလုံး ဇူလိုင် ၃၀ ရက်တွင် ပြန်ဖွင့်မည်.. သမိုင်ဝင်း ရွှေတိဂုံစေတီ တော်အပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဘုရား စေတီတော်များ အားလုံးကို ဇူလိုင် ၃၀ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဗစ်ကာလ အတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဘုရားစေတီများအားလုံးကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လမှစတင်၍ ဖူးမြော်ခွင့်ကို ယာယီပိတ်ထားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဘုရားစေတီတော်များ အားလုံးကို ဇူလိုင် ၃၀ ရက် နံနက် ၄ နာရီမှစ ၍ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည့်
အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဂေါပကအဖွဲ့များအား ဆက်လက်အသိပေးဆောင်ရွက်သွားရန် ဇူလိုင်၂၈ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်လှမြင့်ကလက်မှတ်ထိုးထားသည် အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ရန်ကုန်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘုရားတွေ သုံးဆယ်ရက်နေ့ဖွင့်မယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရင်လည်း ဟုတ်လောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားမှာတော့ လက်ရှိတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်။ တည်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေက အာရုံခံတန်ဆောင်း တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ကြွေပြာခင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ ရေစီရေလာကောင်းဖို့ ရေးမြောင်းတူးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
လူတွေလာရောက်ဖူးရင် နေရာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လောလောဆယ် လကုန်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်တထောင် ဘုရားကိုဖွင့်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးဘူး”ဟု ဗိုလ်တထောင် စေတီတော် ဂေါပက အဖွဲ့ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးကျော်နိုင်ထွန်းက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင် ဒေသကြီး မြို့တွင်းဧရိယာအတွင်းရှိ ဘုရားစေတီများအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်သည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
မြို့ပြင်ရှိ ဘုရား၊စေတီများအား သက်ဆိုင်ရာခရိုင အေထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနများမှ ကိုဗစ်ကော်မတီဝင်များဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားရန်၊ စစ်ဆေးပြီးစီးမှုအား မစောင့်ဆိုင်းဘဲ ဇူလိုင် ၃၀ရက်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ပေးသွားရန်နှင့် အဖွဲ့များမှလည်း သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေအား စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအကြောင်းကြားစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဇူလိုငျ (၃၀)ရကျ ရှတေိဂုံ စတေီတျော ကွီး အပါအဝငျ ဘုရားစတေီ မြား အားလုံး ဖှငျ့ပွီ . . .
ရှတေိဂုံ စတေီတျောကွီးအပါအဝငျ ရနျကုနျတိုငျး အတှငျးရှိ ဘုရားစတေီ မြား အားလုံး ဇူလိုငျ ၃၀ ရကျတှငျ ပွနျဖှငျ့မညျ.. သမိုငျဝငျး ရှတေိဂုံစတေီ တျောအပါအဝငျ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးအတှငျးရှိ ဘုရား စတေီတျောမြား အားလုံးကို ဇူလိုငျ ၃၀ ရကျတှငျ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကိုဗဈကာလ အတှငျး ရောဂါဖွဈပှားမှု ပြံ့နှံ့မှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျရနျအတှကျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အတှငျးရှိ ဘုရားစတေီမြားအားလုံးကို ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလမှစတငျ၍ ဖူးမွျောခှငျ့ကို ယာယီပိတျထားခဲ့သညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အတှငျးရှိ ဘုရားစတေီတျောမြား အားလုံးကို ဇူလိုငျ ၃၀ ရကျ နံနကျ ၄ နာရီမှစ ၍ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစား ဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားသညျ့
အမိနျ့၊ ညှနျကွားခကျြ မြား၊ စညျးကမျးခကျြမြားနှငျ့ အညီ ဖှငျ့လှဈဆောငျရှကျနိုငျရေး ဂေါပကအဖှဲ့မြားအား ဆကျလကျအသိပေးဆောငျရှကျသှားရနျ ဇူလိုငျ၂၈ ရကျ ရကျစှဲဖွငျ့ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျကိုယျစား ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဒျေါခငျလှမွငျ့ကလကျမှတျထိုးထားသညျ အကွောငျးကွားစာ ထုတျပွနျထားသညျ။
“ရနျကုနျထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘုရားတှေ သုံးဆယျရကျနဖှေ့ငျ့မယျဆိုတာ ဟုတျရငျလညျး ဟုတျလောကျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဗိုလျတထောငျဘုရားမှာတော့ လကျရှိတညျဆောကျရေး လုပျငနျးတှလေုပျနတေယျ။ တညျဆောငျရေး လုပျငနျးတှကေ အာရုံခံတနျဆောငျး တညျဆောကျတဲ့ လုပျငနျးတှေ၊ ကွှပွောခငျးတဲ့လုပျငနျးတှေ၊ ရစေီရလောကောငျးဖို့ ရေးမွောငျးတူးတဲ့ လုပျငနျးတှေ လုပျတဲ့အတှကျကွောငျ့
လူတှလောရောကျဖူးရငျ နရောအခကျအခဲဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ လောလောဆယျ လကုနျတဲ့အထိ ကြှနျတျောတို့ ဗိုလျတထောငျ ဘုရားကိုဖှငျ့ဖို့ အစီအစဉျမရှိသေးဘူး”ဟု ဗိုလျတထောငျ စတေီတျော ဂေါပက အဖှဲ့ရုံးအဖှဲ့မှူး ဦးကြျောနိုငျထှနျးက ပွောသညျ။ ရနျကုနျတိုငျ ဒသေကွီး မွို့တှငျးဧရိယာအတှငျးရှိ ဘုရားစတေီမြားအား ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့ လူမှုရေးဝနျကွီးဦးဆောငျသညျ့ စဈဆေးရေးအဖှဲ့မှ ကွီးကွပျစဈဆေးသှားမညျဖွဈကွောငျး၊
မွို့ပွငျရှိ ဘုရား၊စတေီမြားအား သကျဆိုငျရာခရိုင အထှေထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနမြားမှ ကိုဗဈကျောမတီဝငျမြားဖွငျ့ စဈဆေးဆောငျရှကျသှားရနျ၊ စဈဆေးပွီးစီးမှုအား မစောငျ့ဆိုငျးဘဲ ဇူလိုငျ ၃၀ရကျနမှေ့စ၍ ဖှငျ့လှဈပေးသှားရနျနှငျ့ အဖှဲ့မြားမှလညျး သတျမှတျညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ ဆောငျရှကျထားမှုအခွအေနအေား စဈဆေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ယငျးအကွောငျးကွားစာတှငျဖျောပွထားသညျ။
ကိုဗစ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ့ပျက်ပျက် ပြောတဲ့သူတွေ ကို ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး ဒဲ့ပြော လိုက်ပြီ